Hello Nepal News » एक सर्तमा हल्यान्ड बार्सिलोना जान सक्छन् !
जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डका गोल मेसिन युवा स्टार अर्लिङ हल्यान्ड स्पेनिस ला लिगा सरुवाको चर्चा सुरु भएको छ । अघिल्लो वर्ष अस्ट्रियन क्लब रेडबुल साल्जवर्गबाट डर्टमुन्ड पुगेका उनी अहिले उत्कृष्ट लयमा छन् । र, २० वर्षका युवा गोलकर्ता खेलाडीमाथि युरोपका सबैजसो ठूला क्लबहरूको नजर छ ।
सरुवा बजारका ताजा रिपोर्टअनुसार हल्यान्डका एजेन्ट मिना राइओला आफ्ना खेलाडीलाई ला लिगामा लैजान सक्रिय छन् । सरुवा बजारमा हल्यान्ड रियल मड्रिड जान सक्ने चर्चा छ । उनको नाम इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडसँग पनि जोडिएको छ । तर, राइओला हल्यान्डलाई ला लिगामा उतार्न चाहन्छन् ।
इटालियन पत्रिका ‘टुट्टो स्पोर्टस’सँग कुरा गर्दै राइओलाले हल्यान्डलाई सबै क्लबले लैजान सक्ने भए हल्यान्डका लागि दुई वा तीन मात्रै विकल्प रहेको बताएका छन् । ला लिगा क्लब हल्यान्डका लागि पहिलो चाहना रहेको उनले बताए । ‘बजारमा विभिन्न चर्चा छन् । तर, सत्य एउटै हुन्छ । हल्यान्ड कहाँ जान सक्छन्, त्यो मलाई र उनलाई थाहा छ । हामीसँग दुई वा बढीमा तीन विकल्प छन् । आज म यो बताउन चाहन्छु कि, उनी ला लिगामा खेल्न चाहन्छन् । तर, कहाँबाट ? यो समयले बताउनेछ,’ राइओलाले भने ।
राइओलाले हल्यान्डका लागि बार्सिलोना इच्छुक रहेको आफूलाई जानकारी भएको बताएका छन् । ‘बार्सिलोना उनलाई चाहन्छ, यो जानकारी मलाई छ । यो हुनै नसक्ने डिल होइन । तर, कठिनाइ भने छ । हल्यान्ड अब जहाँ जान्छन्, उनी त्यहाँ प्रमुख भूमिकामा जान्छन्,’ राइओलाले भनेका छन्, ‘यदि बार्सिलोना यो भूमिका दिन तयार छ भने भविष्यमा जे पनि हुनसक्छ । बार्सिलोना मात्रै हैन, रियल मड्रिडमा पनि । वा, अन्य कुनै पनि क्लबमा ।’
हल्यान्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो र लिओनल मेस्सीको सफलताको मार्ग पछ्याउन सक्ने खेलाडी भएको भन्दै राइओलाले हल्यान्डले अबको समयमा त्यसैअनुसार भूमिका पाउनुपर्ने बताए । ‘उनी रोनाल्डो र मेस्सीको सफलताको मार्ग पछ्याउन सक्ने खेलाडी हुन् । उनी त्यसका लागि योग्य छन् । र, त्यो हुन उनलाई रोनाल्डो वा मेस्सीकै जस्तो भूमिका चाहिन्छ,’ राइओलाले भने, ‘तर, उनी अहिले डर्टमुन्डका खेलाडी हुन् । जब सही समय आउँछ, त्यहाँ केही हुन्छ । र, त्यो सबैले देख्नेछन् ।’
प्रकाशित मिति २९ पुष २०७७, बुधबार १५:३७